Shirkii Jabuuti ee Farmaajo iyo Muuse wuxuu ahaa mid loola jeedo Turkiga: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shirkii Jabuuti ee Farmaajo iyo Muuse wuxuu ahaa mid loola jeedo Turkiga: WARBIXIN
Waxa Jabuuti ku soo xirmey shir fashilmey oo Farmaajo qasab ku ahaa laakiin uu sumcad daro ka soo qaaday. Shirkan oo saxaafad iyo faan u ahaa kooxda Muuse Biixi ayaa waxa horkacaayay Maraykanka iyo Ingiriiska oo isagu bixiyay sheekada loo yaqaan ”Somaliya iyo Somalilaan” kana saxiixay fadhiid Sheekh Shariif sanadii 2012.
Shirkaa Ingiriisku u qabtey fadhiid Sheekh Shariif iyo waxa loogu yeero Saamileydii jufeysneyd waxa loogu yaboohay Somaliya lacag dhan 200 oo milyan oo doolar, mase jirin shilin ka soo hoyday lacagtaas, waxase ka soo raacay magaca ay bixiyeen ee ” Somaliya iyo Somalilaan.
Shirkan 2020 ee Maraykanku wato
Haddaba waxaad is weydiin kartaa maxaa shirkan degdeg looga dhigey looguna qasbey Farmaajo oo aan u diyaar ahayn in kooxda Muuse Biixi ee Isaaqii kalaba raacsanayn lagu yiraa kula hadla Jabuuti.
Waxa soo baxay in Turkigu kaalin weyn ka qaatey caalam u soo jeedinta dawlada Somaliya dhawaana ku dhawaaqay in dawlada Somaliya codsatey in dalkeeda uu ka raadiyo saliid.
Haddaba si looga hortago in saliidaas badankeeda ay gacanta u gasho Turkiga ama shirkadaha Turkiga, waxa Maraykanka iyo Ingiriisku is yiraaheen aan ka gaarno oo aan dib u nooleyno qadiyada goosadka ee dhimatey marhore.
Waana halka ay degdega ugu qasbeen Farmaajo inuu la fariisto waxa ay ugu yeereen SAAMILEYDA jufeysan lana hadlo Muuse Bixi iyo kooxdiisa ayuu yiri Xuseen Warsame.
”Ma arko wax aan ahayn in kheyraadka dalka ay rabaan in ay gacanta ku dhigaan, ay sidaasna u samaynayaan ayuu yiri Xuseen Warsame. Weligay ma arag dal ay faraha kula jiraan oo ka toosa, waxa tusaale inoo ah Ciraaq, Afganistaan, Liibiya iyo Siiriya oo intaba ay saaxada aduunka ka saareen.
Turkiga oo guul ka gaaray Liibiya inkastoo aduunkaMuslimku cambaareeyay dhiiga muslimiinta e uu daadiyay Erduqaan, ma rabaan inuu taas oo kale ka sameeyo Somaliya inkastoo Turkigu aanu lahayn dhaqaale xoogan u diyaar yahay inuu ciidamo u soo diri dalka ama uba soo jeedo dawlad-adag dhisid.
Waxay hore uga gariireen xerada tababarka ee Turkigu ka dhisay Muqdisho oo soo saarta askar tayo leh. Si kastaba ha ahaatee waxay hadda ku jiraan diyaarinta cida madaxweyne ka noqon doonta Somaliya 2021.
Dhaqaale siinta maamulka Muuse Biixi
Waxaan shiki ku jirin in Farmaajo noqdey halkii loo mari lahaa qorshahooda, ayagoo dabada ku wata kooxda sheegata beesha caalamka ee reer Yurub oo iyaguna warbixin ka soo saaray shirka fashilmey ee Jabuuti.
Qodobka ay aad u xiiseeyaan ayaa ah in dhaqaalaha toos loo siiyo ”magaca Somalilaan”, halka Farmaajo u muuqdey inuu saxiixay qodobkaas, ayagoo (Ingiriisku) qayb ka ahaa soo farogelinta Imaaraadka dekeda Berbera.